Nnwom 116 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
‘Dɛn na mede betua Yehowa ka?’ (12)
“Mɛma nkwagye kuruwa no so” (13)
“Ɛbɔ a mahyɛ Yehowa no, metua” (14, 18)
Anokwafo wu yɛ adehwere kɛse (15)
116 Medɔ Yehowa,Efisɛ otie* me nne; otie me sufrɛ.+ 2 Ɔyɛ aso ma* me,+Enti mete nkwa mu yi de,* mesu afrɛ no. 3 Owu nhama bɛkyekyeree me;Ɔdamoa* yeree me,*+ Na ahohia ne awerɛhow bunkam me so.+ 4 Nanso mebɔɔ Yehowa din sɛ:+ “O Yehowa, gye me!”* 5 Yehowa wɔ ayamhyehye* na ɔyɛ ɔtreneeni;+Yɛn Nyankopɔn yɛ mmɔborɔhunufo.+ 6 Yehowa wɛn wɔn a wonni nimdeɛ.+ Wɔbrɛɛ me ase, na ogyee me. 7 Ma me kra* nsan nhome bio,Efisɛ Yehowa ne me adi no yiye. 8 Woagye me* afi owu mu;M’aniwa anhu nisu, na me nan anhintiw.+ 9 Mɛnantew Yehowa anim wɔ ateasefo asaase so. 10 Ná mewɔ gyidi, enti mekasae.+Mihuu amane pii. 11 Me de, mebɔɔ hu na mekae sɛ: “Onipa biara yɛ ɔtorofo.”+ 12 Nneɛma pa a Yehowa ayɛ ama me nyinaa,Dɛn na mede betua no ka? 13 Mɛma nkwagye* kuruwa no so,Na mɛbɔ Yehowa din. 14 Ɛbɔ a mahyɛ Yehowa no,Metua wɔ ne manfo nyinaa anim.+ 15 Yehowa anokwafo wu+Yɛ adehwere kɛse* ma no. 16 O Yehowa, mesrɛ wo,Meyɛ w’akoa. Meyɛ w’akoa, w’afenaa ba. Nhama a na akyekyere me no, woasansan.+ 17 Mɛbɔ aseda afɔre ama wo;+Yehowa din na mɛbɔ. 18 Ɛbɔ a mahyɛ Yehowa no,+Metua wɔ ne manfo nyinaa anim,+ 19 Metua wɔ Yehowa fi adiwo hɔ;+O Yerusalem, wo mfinimfini na metua. Munyi Yah ayɛ!*+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Mewɔ ɔdɔ, efisɛ Yehowa tie.”
^ Anaa “Ɔbɔ ne mu ase tie.”
^ Anaa “Enti me nkwa nna nyinaa.”
^ Nt., “Sheol ahohia soo me mu.”
^ Anaa “Yehowa yɛ ɔdomfo.”
^ Anaa “nkwagye kɛse.”
^ Nt., “aboɔden.”